Puntland oo heshiis la saxiixatay Shirkada CCECC (China) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Puntland oo heshiis la saxiixatay Shirkada CCECC (China)
Puntland oo heshiis la saxiixatay Shirkada CCECC (China)
June 1, 2019 admin563
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafti balaaran oo uu hogaaminayo oo safar shaqo ku jooga Dalka Chaina ayaa magaalada Beijing kulan kula qaatay Madaxda ugu Sareysa ee Shirkada CCECC.
Waftiga Madaxweynaha oo Ka kooban Wasiiradda Wasaaraddaha Duulista Hawada iyo Garoomada Puntland, Kaluumaysiga iyo Khayraadka Badda, Ganacsiga, iyo Tamarta, Biyaha iyo Macanta ayaa waxaa ay shir la qaateen Madaxda ugu sareeysa Shirkada CCECC, kulankaas oo lagu kala saxiixday fulinta mashaariic horumarineed oo ay shirkaddu ka fulin doonto Puntland.
Wasiirka Wasaaradda Kaluumaysiga iyo Khayraadka Badda Puntland Faarax Cawaash iyo Madaxa Shirkada CCECC ayaa kala saxiixday dhismo deked kalluumaysi oo casri ah oo shirkaddu ka hirgalinayso degmo Ayl ee gobolka Nugaal, taasi oo horumarinaysa ka faa’iidaysiga khayaraadda badda, korna u qaadaysa shaqa abuurka iyo dhaqaalaha dalka, Isla markaana xoojinaysa xidhiidhka ganacsi ee ka dhexeeya Puntland iyo dalka Shiinaha.
Ugu dambayn, Weftiga Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa inta ay dalka Shiinaha ku sugan yihiin waxaa ay yeelandoonaan shirar iyo kulamo muhiim ah oo lagu xoojinayo xidhiidhka labada dhinac, Isla markaa lagu tayaynayo kaabayaasha dhaqaalaha Puntland, waxaana uu qayb ka yahay heshiiska lagu dhisayo dekedda Kalluumaysiga degmada Eyl balanqaadyadii Madaxweyne Deni.
Sarkaal u shaqeynayey QM oo lagu dilay Galkacyo
12 Ruux oo lagu dilay Toogasho ka dhacday Mareykanka
Daawo Sawirada: Sida Muqdisho loogu soo dhaweeyey Madaxweyne C/kariim Guuleed
Dil ka dhacay magaalada Muqdisho